शब्द "propositional तर्क" परिभाषित गर्न, यो एक "कथन" के हो स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ।
त्यसैले, बयान एक वाक्य Ranked व्याकरण सही छ, र गलत वा साँचो हो। यो धारणा एक निश्चित अर्थ व्यक्त गर्नुपर्छ। "क्यानरी" र "चरा": उदाहरणका लागि, वाक्यांश निम्न घटक समावेश "क्यानरी चरा एक छ"।
किन तर्क र प्रमुख प्रारम्भिक अवधारणाहरु मध्ये एक भनिरहेका छन् भन्ने छ। यी अवधारणाहरु बयान त केहि वा इन्कार छ जसमा एक विशिष्ट अवस्था वर्णन गर्नुपर्छ।
यो अवस्था को ठेगाना लगाया लाइन वास्तविकता जब यो circumscribing छ भने, एक साँचो बयान हुन मानिन्छ। आफूलाई द्वारा, "झूटा" र "साँचो" को बयान को सत्य निर्धारण।
Propositional तर्क सरल र जटिल अभिव्यक्ति हुन्छन्। त्यसैले, बस यसको संरचना अन्य अभिव्यक्ति समावेश गर्दैन भन्ने कथन लाग्छ। र जटिल एउटा सरल, तार्किक जडान बयान देखि व्युत्पन्न छन् अभिव्यक्ति समावेश गर्नुहोस्।
शास्त्रीय propositional तर्क कटौती को सामान्य सिद्धान्त द्वारा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। यसलाई सरल अभिव्यक्ति को तार्किक जडान बयान निर्भर वर्णन जो तर्क, को भाग हो।
शब्द "र" को प्रयोग गरेर दुई सरल अभिव्यक्ति संयोजन गरेर प्राप्त एक कठिन प्रस्ताव - को स्थानबाकसदेखाउनुहोस् उल्लेख छैन। सबै बयान यसको संरचना समावेश कि संयोजन को सत्य पुष्टि गर्नुहोस्। मामला जहाँ यसको सदस्य गलत कम्तिमा एक, सारा संयोजनमा एक चिन्ह हो "झूट।"
नै यी अनुमानको आधारित छन् जो जटिल बयान, गठन गर्ने एक संयोजन छ:
- कुनै पनि अभिव्यक्ति (र सरल र जटिल) साँचो वा झूटो या त हुन सक्छ;
- यो जटिल मुखबाट निस्केको वचन को सत्य यो मा निहित बयान र यसलाई मा तार्किक लिंक को सत्य निर्भर गर्दछ।
शब्द प्रयोग गरेर दुई बयान जडान गर्दा "वा" पहिले नै disjunction प्राप्त छ। दैनिक जीवनमा, यो अवधारणा दुई फरक अर्थ को दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो, यो जो अभिव्यक्ति को सत्य अर्थ, दुई को एक साँचो अभिव्यक्ति बिना वा उनीहरूले दुई ती गैर-विशेष अर्थमा छ। दोस्रो, अर्थमा हटाइ को अभिव्यक्ति को एक साँचो हो कि asserts, र अन्य - गलत छ।
Propositional सूत्रहरू विशेष क्यारेक्टरहरू समाविष्ट। तसर्थ, disjunction प्रतीक मा अभिव्यक्ति साँचो हो कि वी संकेत यदि बयान कम्तिमा एक, र यदि दुवै उनको गलत लिंग झूटा को सत्य।
को implication निर्धारण मा आधार बयान गलत छानबिन साँचो हुन सक्दैन भन्ने दाबी छ। अर्को शब्दमा, यो अवधारणा निर्भरता सत्य वा यसको घटक र आफ्नो सम्बन्ध को विधिहरू को मूल्य को अभिव्यक्ति को falsity implies।
को implication एकदम केही उद्देश्यका लागि उपयोगी छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद यो सामान्य मा संचार को पारंपरिक समझ संग धेरै लगातार छ। त्यसैले, जब यो अवधारणा दिएको बयान को तार्किक व्यवहार को महत्वपूर्ण विशेषताहरु यसलाई एक पर्याप्त विवरण नहुन सक्छ उपकरण घेरने।
Propositional तर्क सही र गलत सर्किट पहिलो तर्क र systematization को जुदाई यस्ता एक केन्द्रिय कार्य सुलझाने उद्देश्य। सही परिणाम प्राप्त गर्न, तपाईंले एक वा अर्को रूप प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने विशेष वर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यसैले "वा" जस्तै जस्तै देखिने नगण्य शब्दहरू चासो ", र", संकेत, आदि
तर्क बयान पनि निम्न तत्त्वहरू मिलेर, यसको आफ्नै भाषा छ:
- मूल वर्ण - चर, तार्किक अचल र प्राविधिक प्रतीक;
भने गरिएको छ के को एक राम्रो समझ लागि विशिष्ट उदाहरण जाने गर्नुपर्छ। \_ / वा \_ º / - उदाहरणका लागि, संयोजन प्रतीकको र, disjunction प्रयोग गर्नुहोस्।
यो ताकत आवेग, यसको रूपान्तरण र प्रसारण संयन्त्र
त्यहाँ प्रजनन सल्लाहकार विधि मा जनावर हो?
यूरेशिया को northernmost बिन्दु - केप Chelyuskin
जीवाणुतत्व के छ। के जीवाणुतत्व अध्ययन गरिएको छ। जीवाणुतत्व को आधारभूत
एक सामाजिक संस्थाका रूपमा परिवारको कार्यहरु
दांत मास्क "सेतो लिनन": समीक्षा, प्रयोग, संरचना र दक्षता लागि निर्देशन
खरायो मासु: नोक्सानी र लाभ, पोषण मूल्य र तयारी को विशेषताहरु
ग्रीक देवताहरू बारेमा सबै भन्दा राम्रो चलचित्र: प्लट, अभिनेता र समीक्षा विवरण
निदान, कारण: भ्रूण को CDF के हो
परिदृश्य - हाम्रो ग्रह को एक प्राकृतिक वा मानिसले बनाएको तत्व
कनगो-म्यान: प्रेम र सम्बन्धमा विशेषता
सेन्ट पत्रुस र पावलले नयाँ Basman मा: ऐतिहासिक कोसेढुङ्गामा
प्राकृतिक साबर - यो के हो? साबर र हेरविचार बनेको उत्पादन
Dilara: नाम को मान र रहस्य को मूल
समानुभूति के हो? कसरी यो नै प्रकट